Global Voices teny Malagasy » Nofonjaina Noho Ny Fanaovana Gazety: Ny Momba Ireo Mpanangona Vaovao Voatazona Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Aogositra 2017 15:33 GMT 1	 · Mpanoratra The Irrawaddy Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, GV Mpisolovava
Ity lahatsoratra  navoaka ity dia avy ao amin'ny “The Irrawaddy”, tranonkala iray tsy miankina ao Myanmar, ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Ny fisamborana  ilay mpanangona vaovao sy mpanao fanadihadiana lalina, Ko Swe Win, tao amin'ny seranampiaramanidina Iraisampirenena ao Yangon ny harivan'ny Alahady 30 Jolay 2017 teo no nampiakatra vonjimaika ho dimy ny isan'ireo mpanao gazety voatàna am-ponja ao Myanmar teo am-panatanterahan'izy ireo ny asany, hatramin'ny Jona.
Gadra noho ny politika fahiny i Ko Swe Win, 39 taona, zokiolona amin'ireo mpanangona vaovao ao amin'ny “The Irrawaddy” hatramin'ny 2010-2012. Tamin'ny taona lasa, nahazo mariboninahitra avy amin'ny governemanta izy noho ny fanadihadiana nataony momba ireo fanararaotana nihatra taminà ankizy roa mpanampy an-trano niasa tamin'ny trano fanjairana iray tao Yangon. Ny Andininy faha-66(d) no anenjehana azy, taorian'ny fitoriana azy ho nandefa lahatsoratra iray tao amin'ny Facebook naniratsira ny moanina U Wirathu, fitoriana nataon'i U Kyaw Myo Shwe, mponina ao Mandalay sady mpanaradia an'ilay moanina U Wirathu. Taty aoriana, ny Martsa 2017, niatrika fitoriana  fanindroany i Ko Swe Win noho ireo fanehoankevitra natao nandritra ny resaka iray ho an'ny mpanao gazety momba ilay vesatra faritan'ny Andininy faha-66(d). Iny volana iny ihany, olona telo tsy fantatra anarana no nandrahona  ilay mpanao gazety.
18 taona no niasàn'i U Kyaw Min Swe, 47 taona, ho an'ny The Voice Daily ary amin'izao fotoana izao izy no toniandahatsoratra ao. Nosamborina  niaraka taminy ilay mpanao tsikera an-gazety Ko Kyaw Zwa Naing , taorian'ny namoahan'ilay gazety an-tsoratra amin'ny fiteny ao Myanmar ny lahatsoratra iray izay mametraka fanontaniana momba ny politika ara-tafiky ny firenena sy ny dingan'ny fandriampahalemana. Izy roa ireo dia samy voampanga araka ilay andininy faha-66(d) amin'ny Laàna momba ny Fifandraisandavitra sy ny Andininy faha-25(b) amin'ny Lalàna momba ny Media, taorian'ny nametrahan'ny Lietnà Kolonely Lin Tun avy amin'ny Tafika ao Myanmar ny fiampangàna azy ireo tao amin'ny Biraon'ny polisy ao an-tanànan'i Bahan, ny 17 May 2017. Taty aoriana i Ko Kyaw Zwa Naing dia navotsotra . [FANAVAOZANA: ny 4 Aogositra i Kyaw Min Swe dia nafahana  rehefa nandoa onitra.]
Hatramin'ny nidirany tao amin'ny “The Irrawaddy”, folo taona lasa izay, Lawi Weng, 39 taona, no teny amin'ny lohalaharana—ary matetika mihitsy no eny ambava ady—amin'ny fitaterana ireo fifandiran'ny samy foko ao Myanmar. Tamin'ny taona lasa, notateriny ny momba ny fanafihan'ny  Tandrefana Mpiaradia tany amin'ny fanjakàna avaratra ao Shan ary ireo fifandonana  nifanaovana'ny Tafika Demaokratika Karen Benevolent sy ny tafika mpiandry sisintany nalahatr'i Myanmar tao amin'ny fanjakan'i Kachin. Ny 28 Jolay 2017, neken'ilay mpitsara nitarika ny fotoam-pitsaràna ny raharaha ny handoavany onitra ary nolazainy fa amin'ny fotoam-pitsaràna manaraka, ny 4 Aogositra, izy no hamoaka didy. [FANAVAOZANA: Tsy neken'ny  fitsaràna ilay fanangonantsonia ho famotsorana ny voampanga.]
Herintaona lasa izay i Ko Pyae Phone Aung, 24 taona, mpanangona vaovao, no niditra tao amin'ny DVB. Ny 11 Jolay 2017 no voalahatra ho fotoana voalohany hisehoan'ilay mpanao gazety amin'ny maha-mpandefa lahatsary azy, saingy ny 26 Jona izy no nosamborina , niaraka tamin'i Ko Aye Nai sy Lawi Weng tao Namhsan, teny an-dàlana avy nanao fanadihadiana ny lanonana fandoroana zavamahadomelina nataon'ny TNLA mba hanamarihana ny Andro Erantany nataon'ny Firenena Mikambana aho Fanoherana ny Fidorohana Zava-mahadomelina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/06/105069/
 Ko Kyaw Zwa Naing: https://www.irrawaddy.com/in-person/satirist-feels-restraint-after-recent-arrest.html